Oke osimiri dika isi iyi nke ike | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike nke oke osimiri
Mmiri ike sitere na ike ike, kinetics, thermal and chemistry of seaw water, nke enwere ike iji mepụta ọkụ eletrik, ike okpomọkụ ma ọ bụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Enwere ike iji teknụzụ dị iche iche dị iche iche, dịka ụgbọ ogbara, turbines n'okpuru mmiri na-erigbu mmiri na ebili mmiri oke osimiri, igwe na-enye ọkụ sitere na mgbanwe nke ike kwes nke oké osimiri na usoro dị iche iche nke na-eji ike nke ebili mmiri na nnu nnu.
Ike nke oké osimiri ọ nwere ike buru ibu, mana ọ gbasasịrị nke ukwuu ma ya mere o siri ike ịnakọta, ọ dịkwa anya site na ebe oriri. Naanị nke enwetara ugbu a bụ ike nke ebili, ma ọ bụ naanị n’ebe ụfọdụ.
Ewezuga nke ụgbọ ogbara, teknụzụ ndị dị n'oké osimiri dị na ọkwa ngosipụta na oru ngo ndị ọkwọ ụgbọ elu, na ọtụtụ n'ime ha chọrọ nyocha na mmepe.
Ejiri ụfọdụ teknụzụ ndị a nwere mgbanwe dị ike nke Producción ike na ọkwa amụma (dịka ọmụmaatụ, ebili mmiri, ebili mmiri na ebili mmiri), ebe ndị ọzọ nwere ike ịbụ ndị a na-erigbu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ma ọ bụ n'ụzọ nchịkwa (dịka ọmụmaatụ, ike kwes nke oke osimiri na nnu).
Ozi ndị ọzọ - Ikpo ọkụ ga-gbanwee oké osimiri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmiri » Ike nke oke osimiri
Livai na eco-enyi na enyi jeans mere site n'efu